महिनावारीका बेला प्याड तथा कपडाको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा « Mero LifeStyle
हिजोआज धेरै महिलाले महिनावारीको बेलामा कपडाको सट्टामा स्यानिटरी प्याड प्रयोग गर्छन् । यद्यपि, गाउँस्तरसम्म भने अझै पनि स्यानिटरी प्याड पुग्न सकेको अवस्था छैन । त्यसैले महिलाहरु कपडा नै प्रयोग गर्न बाध्य छन् ।
प्याड तथा कपडाको प्रयोगले महिनावारीको बेला सहज बनाउँछ । यद्यपि, यसलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्न सकिएन भने ठूूलो समस्या पनि निम्त्याउन सक्छ । त्यसैले महिनावारीको बेला प्याड तथा कपडाको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषयमा स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा. बालकृष्ण शाहको सुझाव यस्तो छ :
–महिनावारी भएको बेला पाठेघरको भित्रितह टुक्रिएर रगतसंगै योनीमार्गबाट बाहिर निष्कासन हुन्छ । यस अवस्थामा निष्कासन भएको रगत लुगा र खुट्टाहरुमा लाग्न नदिन केहि न केहि प्रयोग गर्नै पर्छ । यसका लागि प्याड वा कपडा प्रयोग गर्ने गरिन्छ । यस अवस्थामा पाठेघरको मुख अलिकती खुकुलो हुने भएकोले सरसफाईमा ध्यान पु¥याउनु पर्छ ।
–सफा सुती वा फलाटिनको कपडाको रुमाललाई प्याड बनाउन सके संक्रमण हुने सम्भावना धेरै कम हुन्छ । यस्ता रुमाललाई प्रयोग गरिसके पछि साबुन पानीले धोएर, घाममा राम्ररी सुकाएर पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
–लामो समय सम्म एउटै प्याड वा कपडाको प्रयोग गर्नु हुँदैन यसले इन्फेक्सन हुन सक्छ । शरीरबाट रगतबाहिर निस्किएपछि त्यो दुषित हुन्छ । त्यसैले रगत बगेको बेलामात्र नभई रगत बग्न कम भएको बेला पनि प्याड परिर्वतन गरिरहनु पर्छ ।
–महिनावारी हुँदा देखा पर्ने रगत किटाणूलाई संक्रमण हुन सजिलो हुन्छ । त्यसैले धेरै रगत बगेमा र प्याड तथा कपडा भिजेको अनुभव हुने बित्तिकै फेर्नुपर्छ ।
यी हुन् मृगौलामा पत्थरी हुनुको कारण, कसरी बच्ने ?
यस्ता हुन्छन् दम रोगका लक्षण, कसरी बच्ने ?